I-urticaria engokwenyama - Ipulatifomu Yesineke Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nomzimba Nomoya
Ikhaya>Amafomu e-Urticaria>I-urticaria engokomzimba
I-urticaria engokomzimbaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:50:33+02:00
Uma isisusa somzimba esifana nokubanda, ukushisa, ingcindezi, ukungqubuzana noma ukukhanya kubangela isifuba, umuntu ukhuluma nge-urticaria ebonakalayo noma ikakhulukazi umkhuhlane, ukushisa, ingcindezi, njll. I-urticaria.
Ngakho-ke niyahluka phakathi kokulandela amafomu amancane:
Kuzo zonke izinhlobo ezingaphansi kwe-urticaria engokomzimba, isifuba kanye nokulunywa kanye nezinye izikhalazo ze-urticaria zenzeka ekuphenduleni isisusa somzimba, isibonelo amakhaza noma ingcindezi. Kubalulekile ukuthi i-urticaria ebonakalayo yenzeke kuphela ngemuva kokuxhumana phakathi kwesikhumba kanye nesikhuthazi somzimba esifanele futhi nokuthi i-urticaria yenzeka kuphela ezindaweni zesikhumba ezicasukile.
Igama elithi "factitia" livela esiLatini futhi lisuselwa egameni elithi "facere", elisho ukuthi "yenza". I-Urticaria factitia ngakho "yenziwa i-urticaria". I-Urticaria factitia ibangelwa ukuxubha, ukuklwebha, noma ukukhuhla esikhunjeni. Lokhu kuthinta kakhulu abantu abadala abasebasha. Ingxenye yabo bonke abantu abathintekayo yi-urticaria show engapheli, okungenani okwesikhashana, izimpawu ze-urticaria factitia.
Lapha, isivivinyo silula: uma i-spatula noma ngisho nozipho nje ludonselwa esikhunjeni ngengcindezi emnene, ukuvuvukala kubonwa ngqo ezindaweni ebezicindezelwe ngale ndlela. Lesi simo sibizwa nangokuthi i-dermographism, njengoba kungenzeka ukubhala ngale ndlela esikhumbeni ngale ndlela.
The main izimpawu ze-urticaria Ama-factitia ayizifuba eziguquguqukayo, ububomvu, nokunwaya. Ngokuqabukela okukhulu, ukuzwa, ukuluma nokuzwa kokushisa kungenzeka. Izilonda zesikhumba azikaze zivele ngokuzenzekelayo, kodwa kuphela ezindaweni lapho izingubo eziqinile zihlikihle esikhunjeni noma lapho isiguli siklwebhe khona. Amandla amabutho adingekayo ukuqalisa ahluka kakhulu. Ezimweni ezithile zeziguli kuthatha ukuxubha okulula kuphela, kwezinye izimo kudinga ukuklwebheka okunzima ukwenza izilonda zesikhumba.
Ngemuva kokuzihlikihla noma ukunwaya isikhumba kukhona i-areddening kwesikhumba (ngenxa yokwanda kwegazi) futhi kamuva areddened indingilizi edlula kude ne-trigger point, lapho kuthi khona isondo bese lakha ukulunywa kwenzeka. Ekuqaleni, ivili lisabomvu. Kodwa-ke, bese iba mhlophe futhi emva kwemizuzu embalwa isithombe somtholampilo sesiphelele: Isondo elimhlophe elilumayo eliku-areddened isiyingi esidlulela ngaphesheya kwamaphoyinti okuqala. Ngemuva kwesikhashana ububomvu buyehla kancane. Lapho-ke ukulunywa kuba buthakathaka futhi kuyanyamalala ngesondo.
Kunezinketho zokwelashwa ezinomkhawulo kuphela ezitholakalayo. Kubalulekile ukugwema izinto ezishukumisayo. Gwema ukugqoka izingubo ezingakubamba kahle, ezikucasulayo, nezingamabhande. Ngaphezu kwalokho, kufanelekile ukuyeka imithi ethile efana ne-antipyretic analgesics (i-aspirin, ibuprofen, diclofenac), i-penicillin ne-codeine. Ngokwemithi, i-urticaria factitia imvamisa ingalawulwa kahle ngama-antihistamine. Ukulunywa kobusuku kubonisa umkhawulo obaluleke kakhulu wekhwalithi yempilo. Ama-antihistamine athathwa kancane ngaphambi kokwenza ukulala noma okhilimu be-antipruritic angasiza lapha.
Phakathi kwe-urticaria ebonakalayo, i-urticaria ebandayo, cishe engaba yi-15%, ayijwayelekile. Emazweni abandayo (eScandinavia) kuvame kakhulu. Abesifazane bathinteka kabili kaningi kunabesilisa. I-urticaria ebandayo, nokho, ihlala njalo ingalapheki futhi ihlala isilinganiso seminyaka emihlanu kuya kweyisikhombisa. Ezimweni ze-urticaria ebandayo, ukuxhumana nezinto ezibandayo noma amanzi abandayo noma umoya kubangela ukukhishwa kwe-histamine endaweni lapho umkhuhlane uthinta khona isikhumba. Kungakapheli nemizuzu, ubomvu, ukuvuvukala, nomphumela wokulunywa okukhulu. Inkambo yalesi sifo ngayinye ihluke kakhulu; kokunye sekuvele kudalwa ukushintsha kwezinga lokushisa — lapho izinga lokushisa lisuka ekufudumeleni liye emakhazeni — kokunye izinga lokushisa langaphandle kufanele lehle ngaphansi kwenani elinqunyiwe, kanti abanye sebevele bathola izimpawu lapho bephuza okuthile okubandayo noma bedla u-ayisikhilimu.
Izimpawu zesikhumba azimnandi kepha aziyona ingozi. Kodwa-ke, uma izindawo ezinkulu zesikhumba zivezwa kukhuthazo olubandayo, ngokwesibonelo ngokucwilisa emanzini abandayo, kukhishwa inani elikhulu le-histamine. Imiphumela yanda ukushaya kwenhliziyo, umfutho ophansi wegazi, ukuphefumula okuncane futhi mhlawumbe nokushaywa yigazi — esimweni esibi kakhulu, ngendlela yokwethuka kwe-anaphylactic.
Muva nje, okuthiwa izilingo sekungenzeka. Lokhu kwenziwa ngedivayisi ekhethekile yokuhlola amakhaza ekwazi ukucacisa kahle, ngaphakathi kwezinga lokushisa lika-zero kuye ku-45 degrees, izinga lokushisa lapho i-urticaria ebandayo ibangelwa khona ezigulini.
I-urticaria ebandayo ivame ukubangelwa izifo ezithathelwanayo. Kwesinye isikhathi okunye ukungezwani komzimba noma isikhuthazi kungadala izimpawu ezifanayo, kokunye, izithasiselo zokudla (isb. Colorant), izidakamizwa, izitshalo, izinwele zezilwane, izithelo nemifino efuthwayo, ukulunywa yizinambuzane, ingcindezi esikhunjeni, ukuzikhandla komzimba. Lezi zinto ezikhuthazayo, njengoba ubona, zingahluka kakhulu, ngakho-ke ukusesha isikhuthazi esivusa amadlingozi kungaba nzima kakhulu.
Njengoba izifo ezithathelwanayo zivame ukuvela kanye ne-urticaria ebandayo, ama-antibiotic angasiza kakhulu; kufanele kuphathwe isilinganiso esanele ngokwanele (mhlawumbe njengokumnika). Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa ama-antihistamines anezimpawu kanye nabaphikisi be-leukotriene.
Ukwelashwa okubizwa ngokuthi ukuqina kungasetshenziswa njengendlela yokwelashwa ngaphandle kwezidakamizwa. Ekwelashweni kokuqina (ukungabi namizwa okubandayo), iziguli zichayeka emazingeni okushisa abanda ngokuphindaphindiwe namabhati; lokhu kuhloselwe ukubenza bajwayele ukubanda.
Ngokuvikela, okufudumele, okuqinile, kanye nezingubo ezilungele isikhumba, kufaka phakathi amagilavu, amasokisi nezicathulo ezifudumele, kuyanconywa. Izindawo ezingambuliwe zobuso nezinye izitho zomzimba eziveziwe njengezandla kumele zifakwe ukhilimu onamafutha. Ikhithi yezimo eziphuthumayo yokuvikela izimpilo zeziguli ekuvukeleni komphimbo okusongela impilo (okubangelwa ukudla okubandayo neziphuzo) iyatholakala.
Ukushisa kwe-urticaria kungumlingani we-urticaria ebandayo; noma kunjalo, kuyaqabukela ngokweqile. Imbangela ayaziwa; mhlawumbe kunokuzwela okwandayo kwamaseli omzimba ukushisa. Izimbangela yizinto ezishisayo noma umoya oshisayo. Izinga lokushisa elibucayi liyahluka futhi lisuka ku-38 ° C liye ku-50 ° C.
Ngokuvamile, amasondo nokubomvu kwesikhumba kwenzeka kuphela lapho isikhumba sihlangane khona nomthombo wokushisa. Izimpawu zivame ukuhlala isikhashana.
Ukuxilongwa kungenziwa ngokuhlolwa kokushisa. Ngokuthinta isikhumba semphambili ngepayipi lokuhlola eligcwele amanzi ekushiseni okungu-38-44 ° C. Amavili avela ngemuva kwemizuzu engu-5-10 esimweni sohlobo olusheshayo, ngemuva kwamahora esimweni sohlobo sekwephuzile.
Ukugwema ukushisa. Ukwelashwa kwe-prophylactic, okuhlala isikhathi eside, okuyizimpawu ngama-antihistamine anamuhla kuvame ukuphumelela. Inketho yokwelashwa ngaphandle kwezidakamizwa, lokho okubizwa ngokuthi yi-hardening therapy, nayo ingasetshenziswa lapha. Ekwelashweni kokuqina, iziguli zivezwa kaningi ekushiseni ukufeza ukujwayela.
I-urticaria elula noma i-urticaria yelanga ingenye ye-urticaria ejwayelekile yomzimba. Okudume ngokubizwa nge- “sun allergy”. Endabeni ye-urticaria yelanga, amasondo kanye nokulunywa okuyisici se-urticaria kubangelwa ukukhanya, ikakhulukazi ukukhanya kwelanga.
Abesifazane bavame ukuthinteka yi-urticaria yelanga kunabesilisa.
I-Soltic urticaria ithinta kakhulu abantu abasha abaneminyaka engama-30 ubudala. Kepha kukhona nezimo lapho abantu asebekhulile kakhulu bakhulisa lolu hlobo lwe-urticaria. Isikhathi esilinganiselwe sesifo sicishe sibe yiminyaka engu-4-6, kepha ubude besifo seminyaka engamashumi ambalwa buchazwa ezimweni ezithile. Ingxenye yesihlanu yeziguli eziphethwe i-urticaria yelanga ngasikhathi sinye ihlushwa olunye uhlobo lwe-urticaria, njenge-urticaria factitia noma i-urticaria yokushisa.
Imizuzwana noma imizuzu ngemuva kokuchayeka ku-UVA, i-UVB, noma ukukhanya okubonakalayo, isifuba esilumayo senziwa esikhunjeni esikhanyiselwe ekukhanyeni. Imvamisa, isifuba senzeka kuze kuphele amahora lapho ilanga seliphumile. Isikhumba esivikelwe ngokuphelele ekukhanyeni ngokuvamile sihlala singenazo izimpawu. Kodwa-ke, izingubo ezilula ngokuvamile aziyigcini ngokuphelele imisebe ye-UVA nokukhanya okubonakalayo, ukuze kwenzeke ukuthi i-urticaria yelanga ivela futhi ezingxenyeni "zomzimba" ezihlanganisiwe.
Ngokusebenzisa izivivinyo zokukhanya, umuntu angathola ukuthi ngabe abantu abathintekile basabela kuphela engxenyeni yesibani sokukhanya, okungukuthi, ngabe bazwela kuphela emisebeni engaphakathi kobubanzi obuthile bobude.
Cishe ama-60% eziguli ezinokukhanya kwe-urticaria azikwazi ukubekezelela ukukhanya okubonakalayo, cishe ama-30% aphendula kuphela emisebeni engabonakali ye-UVA (340-400 nm wavelength), nokungabekezelelani kwemisebe ye-UVB (280-320 nm) kuyaqabukela kakhulu.
Ukutholakala kwe-urticaria yelanga kungenzeka ngokusebenzisa ukuhlolwa kokukhanya okunembile. Kulokhu, isikhumba sikhanyiswe ngokukhanya kwama-wavelengths ahlukile ukunquma ububanzi be-wavelength obangela i-urticaria. Ukuhlola kwenziwa ngezinto okuthiwa “izitebhisi ezilula” esikhunjeni esingajwayelekile esikhanyise ilanga, njengasemuva noma ezinqeni. Isizathu noma indlela ngqo okuhlaselwa ngayo i-urticaria kubangelwa ukukhanya kwe-irradiation ezigulini ezine-urticaria yelanga akukacaci. Umuntu angazama kuphela ukuvimbela ukuqubuka kwe-urticaria ngokuvikela ogulayo ekukhanyeni noma ukunciphisa izimpawu.
Indlela elula nge ama-sunscreens nge-SPF ephezulu nezihlungi ze-band ebanzi. Lokhu kusebenza kuphela kulabo abanesifo abasabela ekukhanyeni kwe-ultraviolet; zilusizo oluncane lapho i-urticaria iqaliswa ukukhanya okubonakalayo.
Enye indlela yokwelapha izimpawu ukuthatha i- ama-antihistamines. Lokhu kuvame ukufeza kuphela ukwenziwa ngcono kokubekezelelana kokukhanya. Iziguli ezizwela ukukhanya ezisabela ngemuva kwemizuzwana embalwa elangeni nge-urticaria zisizakala okuncane ngalolu lwazi. Ama-antihistamine avimbela kuphela ukulunywa nesifuba, kepha hhayi ukubomvu kwesikhumba.
Enye indlela yokwelashwa okujwayele ukukhanya (ukuqina). Ukwelashwa okunjalo kunemiphumela engemihle, kepha kuyabiza. Kulokhu kwelashwa ekuqaleni izingxenye zomzimba kuphela ezinemisebe yokukhanya ebangeni elilodwa le-urticaria-inducing wavelength noma nge-UVA light (UVA-hardening); ngokuhamba kwesikhathi umzimba wonke usukhanyiswe ngemisebe. Endabeni yabagulayo abathile, lokhu kubangela ukubekezelelana okuhle kwelanga kakade ezinsukwini ezimbalwa.
Amahora amane kuya kwayisishiyagalombili ngemuva kokuthi ogulayo ebhekene nengcindezi engaguquguquki, ebheka phezulu, (ebambezelekile) yemiphumela ye-urticaria, edala ukuvuvukala okujulile, okuvame ukuba buhlungu okungaphikelela phakathi kwamahora ayisishiyagalombili kuya kwangu-48. Ngokwemitholampilo, ingcindezi ye-urticaria ingahlotshaniswa nokukhathala, ukuqaqamba komzimba, nokwanda okushisa okuncane. Njengefomu elingalodwa, ingcindezi ye-urticaria, enesabelo se- <1% yayo yonke i-urticaria, ibonakala ingavamile kakhulu; imvamisa ihlotshaniswa ne-urticaria engapheli, futhi ivame ukubonakala ngomlando omude.
Izingxenye zomzimba ezithwele imithwalo yengcindezi, njengezintende, amathe, amahlombe kanye nomhlane, zithinteka kakhulu. Abesilisa bathinteka kabili kaningi kunabesifazane. Isikhathi esiphakeme yiminyaka engama-30. Isikhathi kuze kube ukuthethelelwa okuzenzakalelayo yiminyaka eyisithupha kuya kweziyisishiyagalolunye.
Ngokuyinhloko, inqubo yokuxilonga iqukethe ukuhlolwa kwengcindezi, okufundwa ngokushesha futhi kubambezeleke amahora ayisithupha.
Ngokwelashwa, ukusatshalaliswa kwesisindo endaweni enkulu ukuze kuncishiswe ingcindezi kunconywa. Amaphethelo ngakho-ke kufanele agwenywe. Futhi, iziguli ezinokungahambi kahle kwezinyawo zingasizwa ngokufakwa okukhethekile okukodwa. Ukweqiwa okuphezulu kwama-antihistamine kungathuthukisa izimpawu.
Kwenzeka ezindaweni eziningi, i-urticaria yokudlidliza noma i-angioedema yokudlidliza okwenziwe endaweni kwenzeka ngesikhathi sokudlidlizela okunamandla njengokuvela ekusebenziseni i-jackhammer. Imbangela ivame ukucaca.
Lesi sifo asivamisile ukubonwa, ngoba yingxenye encane kuphela yabantu echayeke ekudlidlizeleni okunamandla kangako.
Ngenxa yobudlelwano obubonakalayo obubonakalayo, ukugwenywa kwezici eziyimbangela ukwelashwa kokuzikhethela kuleli cala.